Uhlu lwezinombolo zefoni laseSaudi-Arabia | Ukuthengisa Kuholela | Database lakamuva Lokuposa
Uhla lwezinombolo zocingo zase-Saudi-Arabia
Database lakamuva Lokuposa » Uhla lwezinombolo zocingo zase-Saudi-Arabia
Izinombolo zocingo zase-Saudi-Arabia
Uhlu lwezinombolo zocingo zaseSaudi-Arabia lufake phakathi uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi abangama-30,000. Siphinde futhi sinikeze lonke uhlu lwefoni olusha nolusebenzayo. Idatha yethu yohlu lwezinombolo zocingo zase-Saudi Arabia ingakusiza ukufinyelela izethameli eziqondiwe ezifanele ngesikhathi esifushane kakhulu.
Uhlu lwedatha yaseSaudi Arabia lukunikeza ukubuyiselwa okukhulu kokutshalwa kwezimali futhi nalo linobungozi obuphansi bokutshala imali kulo. Ungasebenzisa le database yabathengi baseSaudi Arabia njengethuluzi lokwakha amathuba, ukumaketha imikhiqizo yakho, insizakalo nezinye izinjongo zeB2C.
Thenga Uhlu Lwabasebenzisi Lwabasebenzisi Base-Saudi Arabia
Izinombolo Zefoni Zonke: 30,000
Uhlu Lwezingcingo lwabathengi baseSaudi Arabia
I-Database yakamuva Yokuposa noma i-latestdatabase.com iyindawo ethembeke kakhulu uma kuziwa kwinombolo yocingo yabathengi ehola njengoba benza ibhizinisi kusukela ngo-2012. Isiteji okuwukuphela kwaso esihlinzeka ngamakhasimende kumhlinzeki wohlu lwezinombolo zabathengi oluqinisekisa ngama-95% amarekhodi anembile .
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseSaudi Arabia noma uhlu lwezinombolo zeselula lubaluleke kakhulu kunolunye uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi njengoba lufaka imininingwane eminingi ngabantu obashayayo futhi banemininingwane yokuxhumana nabantu abasemakethe yakho eqondisiwe, kungaholela kuwe ngokwenza okuhle nokusebenzayo ngocingo, ukumaketha kwe-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza.
Uhlu lwefoni yabathengi baseSaudi Arabia noma uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi olusuka kuDatha Yokugcina Yama-imeyli liqukethe amarekhodi angama-30,000 aqoqiwe ohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi abafinyelela ku- $ 400, ngesikweletu esithile esikhokhwayo kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba yifomethi yefayela le-Excel CSV ongayikhokha nge-master Card, i-paypal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-visa, inyunyana yasentshonalanga nezindlela ezikhokhelayo.
Indlela ehlakaniphile yokuhlunga uhlu lwakho ukukhomba izimfanelo ezisemqoka abathengi bakho abahle abanazo bese uhlela uhlu lwakho ukuze amathemba anezici ezifanayo aphezulu. Ukuhlosiwe okulindelwe kokuhola ngocingo kusuka kuhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseSaudi Arabia, ungakhetha imininingwane ekuhlu lwakho ukukhomba abantu abathile abangahle bathenge imikhiqizo noma amasevisi wakho ngokususelwa kunombolo yabantu abaningi, njengegama labo eliphelele, imali engenayo, amakheli , izwe namakhodi we-zip.
Saudi-Arabia Inombolo Inombolo Umbuzo & Impendulo